I-ApexChat: Phendula kwi-Webchat yakho 24/7 kunye ne-Knowledgable Chat Agents | Martech Zone
I-ApexChat: Phendula kwi-Webchat yakho ye-24/7 kunye nee-Arhente zeNcoko ezikwaziyo
NgoLwesithathu, Matshi 9, 2022 NgoLwesithathu, Matshi 9, 2022 Douglas Karr
Abathengi bethu abambalwa bonwabe kakhulu yincoko abayidibanise nesayithi yabo… sade satyhila iindaba ezimbi. Xa sihlalutya incoko ikhokelela into esiyifumeneyo kukuba iinkokeli ezazinxibelelana ngokuthe ngqo nommeli zivale ngokuqhelekileyo emva kokucwangcisa idinga kunye nomxhasi.
Ingxaki ngeNcoko yeWebhu
Abathengi baphendule kuphela kwincoko ngqo ngexesha leeyure zabo zeofisi. Nayiphi na incoko ngaphandle kweeyure zokusebenza icele i-imeyile okanye inombolo yefowuni. Lo ibingumba omkhulu… uninzi lweminxeba yabo ibiphuma ngaphandle kweeyure zomsebenzi ngorhatya nangeempelaveki. Ezo zikhokelo ziye zalandelwa kodwa kunqabile ukuba ziphendulwe kwaye phantse azizange zivale.
Kukho into elindelekileyo nge-webchat. Xa ubeka loo ncoko kwindawo yakho, abantu balindele ukuba uya kuphendula. Kwaye ukuba awuphenduli… badlulela kwindawo elandelayo. Abantu bahlala besemsebenzini ngoMvulo ukuya ngolwesihlanu imini yonke kwaye abaqalisi nokuphanda ngeenkonzo kude kube ngokuhlwa okanye impelaveki xa befumana ixesha. Kwaye xa besenza ... kufuneka ube lapho!
Pay-For-Performance Ii-arhente zeNgxoxo eziPhila
ApexChat ibonelela ngenkonzo epheleleyo yokuncokola. Basebenzisa ii-arhente zabo zengxoxo ephilayo eziqeqeshelwe ishishini kunye neqonga lesoftware kwiingxoxo zenkonzo. Oku kuthetha ukonga iindleko ezinkulu njengoko sisusa imfuneko yokuthatha abasebenzi bakho abaphambili kude kuxanduva lwabo oluphambili lokusingatha iingxoxo okanye ukuqesha nokuqeqesha nabani na ukuba aqalise.
Abathengi babonile, ngokomndilili, ukuba I-42% yabakhokelayo bayaguqukad ngencoko ephilayo zenzeka emva iiyure zeshishini eziqhelekileyo ngo-9 am ukuya ku-5pm Ngaphandle kokhuseleko lwango-nge-clock ungaphoswa phantse sisiqingatha sokhokelo onokuthi ulufumane kumnikezeli wakho weNgxoxo ye-Live.
Okona kulungileyo, ngaphandle kwe-50 yeedola zabo zenyanga ubuncinci bentlawulo ephindaphindiweyo, ApexChat ibiza umrhumo kuphela ngenkokhelo yokwenyani izikhokelo ezifanelekileyo ezo zithunyelwe kuwe. Akukho zivumelwano zexesha elide, kwaye unokurhoxisa inkonzo nangaliphi na ixesha ngaphandle kwesohlwayo.
Iiarhente zinokuphendula nge-webchat yakho, kuFacebook Messenger, incoko yeShishini lam likaGoogle, okanye nangeSMS. Banokudibanisa undwendwe nomntu okwinkampani yakho ngefowuni okanye bacwangcise idinga egameni lakho. Bade banikeze i phuma-injongo popup ukubamba iindwendwe ezinokuhamba.
Siphumeze isisombululo kubathengi aba-3 ngoku, kuquka i Indianapolis ikontraka yokuphahla, kwaye bonke bonwabile ngenqanaba lenkonzo kunye neempendulo zobuchwephesha ababonelela ngazo ii-arhente zengxoxo. Kwaye… okona kulungileyo, bayazi ukuba abahlawuleli ii-spammers okanye iinkokeli ezingafanelekanga. I-ApexChat ikwabonelela nge-app ephathwayo, isisombululo seleyibhile emhlophe, iiphothali zeqabane, kunye neengosi zabathengi ezinohlalutyo oluqinileyo.
ApexChat Industries ezixhaswayo
Amashishini axhaswa yi-ApexChat aquka iinkonzo zasekhaya, amagqwetha, ababoneleli ngenkonzo yezonyango, ukwamkelwa ekholejini, kunye nee-arhente zentengiso. Badibanisa isizukulwana sabo esikhokelayo kubo bonke abafowunelwa, ukucaphula, intengiso, uhlalutyo, okanye iqonga lokuthengisa kwaye ngoku bakhonza amashishini angaphezu kwe-8,000.
I-ApexChat yeyona software ilungileyo yencoko kwishishini elisemthethweni. Sichithe ixesha elininzi siphanda eyona nkampani igqwesileyo, kwaye ndiyavuya ukuba sigqibe kwi-ApexChat. Zange sibe nangxaki nabo. Isoftware yabo yenza kube lula ukwenza ukutya, kwaye sifumana imibhalo yencoko kwangoko. Ndincoma kakhulu i-ApexChat.
U-Eric Stevenson, iGqwetha
Cela iDemo ye-ApexChat
Isibhengezo: Siliqabane kwaye simanyene ApexChat kwaye sisebenzisa ikhonkco lethu lokunxibelelana kweli nqaku.
tags: apexchatUkucwangciswa kwengqeshoigqwetha incokoigqwetha live ingxoxoncokolaii-arhente zengxoxoiinkonzo zasekhaya incokoiinkonzo zasekhaya incoko liveigqwetha incokoigqwetha live incokoisiqinisekiso esikhokelayouhlala ngcokolaincoko zonyango liveiinkonzo zonyango incokohlawula ukusebenzahlawula inkokhelo nganyeizikhokelo ezifanelekileyo
Sebenzisa i-jQuery ukuMamela kwaye uPhume ukuTreyithwa koMsitho we-Google Analytics kuyo nayiphi na into yokucofa
I-Tailwind Yenza: Yenza, Cwangcisa, kwaye upapashe izikhonkwane ezintle kwiPinterest